gender Archives • Zivo SUCCESS
Quick Read Mazano eKugashira Hybrid Pamhepo uye Mu-Munhu Musangano
WHO Kudzidza Nekugovera Portal: Virtual Launch uye Nyaya Slam
murume kana mukadzi
Iyi webinar yakaratidza basa revatungamiriri vezvitendero sevabatsiri vakakosha mukusimudzira tsika dzakanaka dzemagariro ehutano hwekubereka uye kugara zvakanaka kwevechidiki nevakadzi., pamwe nekukosha kwekudyidzana uye ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa9983 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa9920 Views
MunaSeptember 2021, Zivo SUCCESS uye Policy, Advocacy, uye Kukurukurirana Kwakawedzerwa Kuvanhu Nehutano Pakubereka (PACE) purojekiti yakatanga yekutanga munhevedzano yenhaurirano dzinofambiswa nenharaunda paPeople-Planet Connection Discourse chikuva chekuongorora. ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa10854 Views
Vanhu vakuru, kusanganisira vakadzi vanoita zvechipfambi, vanotarisana nezvipingamupinyi zvekuwana rubatsiro rwehutano izvo zvinosanganisira kuserwa, kuita mhosva, uye mhirizhonga kuvanhukadzi. Muzviitiko zvakawanda, zvipingaidzo izvi zvinogona kudzikiswa nevadzidzisi vezera, vanounza nzwisiso yakakosha uye ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa10541 Views
Mujaho wekujairana neCCIDID-19 wakonzera shanduko kune chaiwo mafomati ekudzidziswa kwehutano uye kupa masevhisi. Izvi zvakawedzera kuvimba nedhijitari tekinoroji. Izvi zvinorevei kune vakadzi vanotsvaka ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa11476 Views
Vatungamiriri vezvitendero : Vanobatana kuitira kugara zvakanaka kwevechidiki nevakadzi
Oumou KeitaCourtney McLarnon-SilkMariam DiakiteFrancesca Quirke Zvita 7, 2021
Iyi webinar yakaratidza basa revatungamiriri vezvitendero sevabatsiri vakakosha mukusimudzira tsika dzakanaka dzemagariro ekuita kwenharaunda muhutano hwekuzvara uye kugara zvakanaka kwevechidiki uye. ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa3471 Views
Webinar Recap: Vechidiki kubva kuBonde uye Gender Vadiki
Shruti Sathish Gunyana 10, 2021
Pana Nyamavhuvhu 5, 2021, Ruzivo SUCCESS uye FP2030 yakabata chikamu chechina muchikamu chechina cheKubatanidza Hurukuro dzakatevedzana.: Kupemberera Kusiyana-siyana Kwevechiduku, Kutsvaga Mikana Mitsva Yekugadzirisa Matambudziko, Kuvaka Nyowani ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa4139 Views
Quiz Gender Inokanganisa Sei Kutungamira Kweruzivo?
Natalie Apcar Chikumi 29, 2021
Gender uye gender dynamics inokanganisa manejimendi eruzivo (KM) munzira dzakaoma kunzwisisa. Ruzivo SUCCESS's Gender Ongororo yakaratidza matambudziko mazhinji anobva mukudyidzana pakati pevakadzi neKM.. Iyi positi inogovera zvakanakisa kubva kuGender Analysis; zvinopa ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa5490 Views
Q&A Magadzirirwo eMurume Ekudzivirira Kubata pamuviri paHorizon
Stevie O. Daniels Kubvumbi 20, 2021
Mabhindauko ezvekudzivirira pamuviri evarume ane mukana wekushandura nyika yekuronga mhuri. Male Contraceptive Initiative director director Heather Vahdat akataura nesu nezve nzira itsva dzechirume dzekudzivirira kubata pamuviri dzichaumba hutano hwepasi rose. ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa6341 Views
Data Quick Read Kusasiya Munhu Pakuronga Mhuri
Kaja Jurczynska Kurume 18, 2021
Kunyangwe kune zvakawanda kupfuura 60 miriyoni yekuwedzera vashandisi vemazuva ano kudzivirira kubata pamuviri muFP2020 inotarisa nyika kana zvichienzaniswa 2012, chirongwa chedu chinoramba chisina kupera, neruzivo nerubatsiro rwezvekuronga mhuri rwusati rwasvika ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa14794 Views